काठमाडौंको अर्को ठाउँमा पनि एमालेको प्यानल नै विजयी, जताततै खुशीयाली !
काठमाडौं। काठमाडौंको दक्षिणकाली नगरपालिका-१ मा नेकपा एमालेको प्यानल नै विजयी भएको छ । नेपाली कांग्रेसका उम्मेदवार जयन्द्र लामालाई पराजित गर्दै एमालेका जय थापामगर वडाध्यक्ष विजयी भएका हुन् । एक हजार ९ मत पाएका पाएर वडाध्यक्ष...बाँकी
केशव स्थापित भन्छन: जित मेरो हो बालेन चुपचाप बसे हुन्छ मत गनेर सक्किएको छैन
काठमाडौं। काठमाडौंमा महानगरपालिकामा मेयरका स्वतन्त्र उम्मेदवार बालेन्द्र शाह (बालेन)ले मतगणना प्रतिनिधि राख्नेबारे जिल्ला निर्वाचन कार्यालयले गरेको व्यवस्थामा आपत्ति जनाएका छन् । बालेनका अनुसार मतगणना गर्दा पाँच जना स्वतन्त्र उम्मेदवारको एकजना प्रतिनिधि राख्न सकिने जानकारी निर्वाचन...बाँकी
लालकिल्लामै एमाले झण्डै पत्तासाफ, भर्खरै आयो डरलाग्दो खबर !
काठमाडौं। नेकपा एमालेका महासचिव शंकर पोख्रेलको गृहजिल्लामै एमालेले कमजोर देखिएको छ। पोखरेलको गृह जिल्ला दाङमा मतगणनाको शुरुआती चरणमै एमाले पछि परेको छ। १० वटा स्थानीय तह रहेको दाङका ९ स्थानीय तहको मतगणना भइरहेको छ। जसमा...बाँकी
बेकारको हल्ला खल्ला गर्न जरुरी छैन, गठबन्धनले चितवनमा जित्नेमा विश्वस्त छु : प्रचण्ड
काठमाडौं। नेकपा (माओवादी केन्द्र) का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले गठबन्धनले चितवनमा जित्नेमा विश्वस्त रहेको बताएका छन्। शुक्रवार स्थानीय तहको निर्वाचनमा भरतपुर महानगरपालिकामा रहेको मतदानस्थलबाट मत हालेपछि सञ्चारकर्मीसँग प्रतिक्रिया दिँदै उनले गठबन्धनले चितवनमा जित्नेमा विश्वस्त रहेको...बाँकी
पेज ३ देखि ८३१ सम्म :« अगाडि१२३४५...८३१अर्को »